Puntland oo War adeg kasoo saartay qof si bareer ah loogu dilay Garoowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa ka hadlay Gabar dhalinyaro ah oo labadii bishaan Magaalada Garoowe ugu geeriyooday rasaas ay fureen Ciidamo ka tirsan Maamulkaas.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ayaa waxaa lagu Cambaareeyay falkii Ciidamada ay ku rasaaseeyeen dad shacab ah oo banaanbax ka waday bartamaha Garoowe, rasaastana ay ku geeriyootay gabadha oo lagu magacaabi jiray Nadiiro Faarax Shire.
Xafiiska Difaacaha ayaa sheegay in Marxuumad Nadiiro Faarax oo 15 sanno jir aheyd marka hore uu soo gaaray dhaawac Culus, isla markaana la geeyay Isbitaalka weyn ee Magaalada, hayeeshee halkaas labadii bishaan ugu geeriyootay dhaawicii soo gaaray.
Sidoo kale Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa laamaha amniga ka dalbaday inay si dhaqsi ah sharciga u hor keenaan Askarigii sida cad ugu riday rasaasta dadkii banaanbaxa ka waday Garoowe 26-kii December 2020.